Ny fotsy hoditra amin'ny lelan'ny zaza no antony. Nahoana no misy loko fotsy eo amin'ny lelan'ny zaza vao teraka, zazakely, aorian'ny herintaona?
Fitaratry ny fotsy amin'ny lelan'ny zaza - ny antony tsy misy antony sy ny famantarana mampidi-doza
Ny takelaka fotsy amin'ny fitenin'ny zaza dia miteraka ny ray aman-dreny manahy ny eritreritra sy ny soso-kevitra fa marary ny menaka. Mba tsy hahavery ilay aretina, tokony ho fantatrao hoe amin'ny tranga inona io soritr'aretina io dia soritr'aretin'ny aretina, ary izay heverina ho fihetsika mety amin'ny fihetsik'ilay zaza amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ny fahavoazana ary ny antony hafa.
Ny fametahana fotsy eo amin'ny lela no fepetra
Ny fiteny fotsy amin'ny zaza dia azo aseho amin'ny fisehoana ara-dalàna amin'ny fiarovan-tenan'ny vatana raha misy famantarana toy izao:
Ny takelaka dia manana loko maivana sy mangarahara kely;
Mora ny haavon 'ny takelaka, ny endrik'ilay lela dia hita eo ambaniny;
Ny lela, voasariky ny fanafihana, dia manana rafitra tsy miova;
Tsy misy fofona tsy mahafinaritra avy amin'ny vava;
Teboka dia hita mibaribary rehefa avy mifoha ary tsy miseho rehefa nesorina nandritra ny andro;
Ny takelaka dia mora entina amin'ny bobin-jiro;
Ny loko fotsy amin'ny lelan'ny zaza dia tsy mitondra fahatsapana hafahafa aminy.
Ny endriky ny akanjo fotsy amin'ny tranga sasany dia tsy ara-dalàna ary mifandray amin'ny asan'ny leokocytes. Na dia amin'ny fanadiovana tanteraka ny nify ao am-bava aza, eo anelanelan'ny nify dia mitazona sakafo, izay fitaovana mahomby ho an'ny fivoaran'ny bakteria. Mba hamotehana azy ireo dia takiana ny asan'ny leokocytes. Ny fihetsiketsehan'ny hetsika amin'ny alina marefo amin'ny leokocytes dia hita amintsika amin'ny maraina amin'ny endriky ny felam-baraka maivana. Amin'ny vanim-potoana mafana dia mihamangatsiaka bebe kokoa ny loko fotsy eo amin'ny lelan'ny zaza, ary amin'ny vanim-potoana ivelan'ny vanim-potoana dia mihamangatsiaka izy ary afaka mahazo alokaloka mavo.
Lamina fotsy amin'ny lelan'ny zaza vao teraka
Ny mpifidy amin'ny maha-loharanom-bitsika maniratsira ny fitenin'ny ankizy ao anatin'ny taona iray dia mahazatra kokoa noho ny antony hafa. Ankoatra ny fanosehana, takelaka fotsy eo amin'ny lelan'ny zaza vao teraka dia mety ho mariky ny aretina toy izany:
viral stomatitis - dia mipoitra amin'ny kitrotro, tazo mena midorehitra, pox chicken and other diseases viral;
Ny aretina azo avy amin'ny gastrointestinal: ny dysbacteriosis , ny dite, ny fikorontanana, ny poizina, ny fandikana ny asidra ao amin'ny vavony;
fanafody ho an'ny antibiotika;
Tongolobe amin'ny zaza
Ny voninkazo fotsy eo amin'ny lelan'ny zaza dia mety ho hitan'ny ray aman-dreny indraindray. Ity trangan-javatra ity dia mifandraika amin'ny sakafom-behivavy iray mifototra amin'ny ronono na ronono afa-tsy ronono, izay mamela fotsy fotsy rehefa avy nihinana ary rehefa miala sasatra. Ny felana fotsy amin'ny lelan'ny zazakely dia mety ho ara-dalàna raha toa ka miaraka aminy izany famantarana izany:
Mangina ny zaza, manana torimaso tsara sy fironana tsara;
Ny takelaka dia tsy miraharaha afa-tsy ny lela, fa tsy manitatra mankany amin'ny faritra manodidina ny foitra;
Azo alaina mora foana ilay plaque, ary mavokavoka ny lelany eo ambaniny, ary tsy mampiseho marika amin'ny fiterahana.
Ao amin'ny zazakely, ny fitaratra fotsy amin'ny lela dia afaka manondro ny mariky ny fanombohan'ny aretina, raha misy soritr'aretina toy izao:
Ny takelaka dia mipetaka amin'ny lela sy any amin'ny faritra hafa amin'ny lavaka;
Mendri-piderana izy, mandà tsy hihinana, matory tsy an-kijanona;
Rehefa nesorina ilay takelaka, dia misy fiteny mampalahelo hita.
Teny fotsy amin'ny ankizy aorian'ny taona
Amin'ny zaza iray taona ka hatramin'ny roa taona, ny fivalozana fotsy dia mety ho vokatry ny fampiasana voankazo matavy kokoa. Ny plaque amin'ny fitenin'ny fotsy, izay miseho tsindraindray amin'ny zaza, dia manjavona rehefa mihetsi-po ny ankizy. Raha toa ka tsy sorena amin'ny soritr'aretina hafa ilay zaza, dia faly izy ary mafana fo, manana fialan-tsasatra tsotra sy nofinofy, dia tsy misy antony tokony hampanginana azy.
Fiteny fotsy amin'ny zaza - antony
Mba hahatakarana ny antony amin'ny tenim-paritra fotsy, tokony handrefesana ny hafatry ny zaza ianao, handinika tsara azy io ary hanao fandinihan-kevitra momba ny fandalovan'ny ratra. Raha mahatsiaro ho matoky ny ankizy iray, dia asehony ny asany, dia salama tsara, avy eo ny ray aman-dreny dia tsy manahy. Ao amin'ireo aretina ao anatin'ilay soritr'aretina izay misy takelaka fotsy amin'ny lelan'ny zaza dia mahazatra ireto manaraka ireto:
Ny aretina ateraky ny atidoha: stomatitis, candidiasis, caries. Noho izany, ny zaza dia ho kisendrasendra, afaka mandà ny hanaiky ny sakafo ary afaka mitaraina noho ny fanaintainana. Amin'ny lafiny ara-tarehimarika dia misy tabilao manarona ny foitra manontolo, ny sarimihetsika amin'ny lela sy ny fery dia ho hita. Ny fanesorana ilay tetezana dia mety hitarika mankany amin'ny ra.
Aretina amin'ny rafi-pisefoana: angina , aretina miteraka fanafody, gripa, bronchitis, pharyngitis. Ny fotsin'ny fotsy dia hiaraka amin'ny fanaintainana eo amin'ny tenda, ny tazo mahery ary ny fisehoan'ny catarrhal.
Ny aretina vokatry ny tazomoka : tazo, mena, diphtheria, izay misy takelaka misy menaka ny teboka eo amin'ny lela.
Areti-mifindra amin'ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinal: fihinan'ny sakafo , dysbiosis, gastritis. Ny takelaka dia mety misy loko matevina. Mety mitaraina noho ny fihenan-tsakafo, ny fanaintainan'ny alika, ny fitabatabana ny zaza. Misy koa ny soritr'aretina hafa: tazo mahery, marary an-dabozia, ranomafana, fery.
Teboka fotsy amin'ny lelan'ny zaza
Fotsy fotsy sy fotsy fotsy amin'ny lela misy spots dia mety ho marary mafy amin'ny aretina mafy. Noho izany antony izany, ny ray aman-dreny dia tokony hifandray amin'ny dokotera raha vao mahatsikaritra ireo famantarana ireo. Anatin'ireo olana izay miteraka taha fotsy, ny dokotera dia mamaritra izao manaraka izao:
ny fampiasana fanafody ara-panafody mandritra ny fotoana lava;
aretina mitaiza sy fihenjanana ao amin'ny rafi-pandaminana;
fihinanana tafahoatra sy sakafo mamy;
stomatitis ny voay.
Ny lolo fotsy sy ny loko fotsy
Hitan'ny ray aman-dreny ny hafanan'ny vatan'ny zaza, raha te hahita ny antony maha izy azy ny fototeny. Ny hafanana ara-dalàna sy ny fanao mahazatra ataon'ny ankizy dia manoro hevitra fa ny zaza dia salama. Ny mari-pahaizana ambony sy ambony, ny takelaka manitra, ny tsy fahampian-tsakafo sy ny torimaso dia tokony hampitandrina ireo ray aman-dreny. Ireo soritr'aretina dia miseho amin'ny aretina toy izany:
endrika matevina na kandidan'ny aretina;
ny tazo mena, diphtheria;
Manana loko sy fotsy ny zaza
Rehefa mamaritra ny antony mahatonga ny zaza hanana loko fotsy amin'ny lela, dia tokony hohadinoina daholo ireo soritr'aretina miaraka amin'ny takelaka. Raha miaraka amin'ny fahatsapana mampihetsi-po ilay takelaka, dia handa tsy hihinana sakafo ny zazakely, ary ho rendrarendra sy hatory tsara. Ny antony mahazatra indrindra ny fanaintainana amin'ny fiteny dia fanehoan'ny candidiasis. Ao anatin'io aretina io dia mety hipetrahan'ny taolan-tehezana ny hoditr'andro. Amin'ny fanaraha-maso ny maso dia azo atao ny manamarika fa mielan-doza ny mitefon'ny moka ary miova kely.
Ny antony hafa amin'ny fahasosoran'ny lela sy ny fisian'ny takelaka dia aretina mifindra (angina, pharyngitis) sy ny tsy fahampian-tsakafo. Amin'ny tranga sasany dia tsy azo faritana ny antony mahatonga ny fanaintainana amin'ny fiteny. Angamba, ny fihetseham-po toy izany dia mety mifandray amin'ny aretin'ny rafi-pananahana na ny toetra manokana an'ny vatan'ny ankizy.
Lamina mavo fotsy amin'ny lelan'ny zaza
Ny loko mavo fotsy eo amin'ny lela dia manana fiantohana matevina, noho izany dia sarotra ny manala izany amin'ny fampiasana kiraro matevina. Amin'io tranga io, ny fisian'ny takelaka dia mety hampifangaro azy amin'ny fofona tsy mahafinaritra avy amin'ny vava. Ny endriky ny loko marevaka amin'io loko io dia mety hiteraka noho ny antony isan-karazany:
fihinanana tsy fihinam-boa, fihenan'ny sakafo matavy, tsy fahampian-tsakafo voly;
Ny sakafo izay ahitana be dia be dia be;
sakafo misy poizina, miaraka amin'ny sakafom-bovoka sy ny tsy fahampian-tsakafo;
Gastrointestinal aretina: gastritis, dysbiosis;
Lamina fotsy amin'ny tendron'ny lelan'ny zaza
Na inona na inona ny toerana misy ny takelaka manify ao amin'ny lavaka, ny lokony sy ny tsy fitovizany, dia mety ho ampahany amin'ny sarin'ilay aretina ihany io soritr'aretina io. Izany hoe, tsy azonao atao ny manao Diagnostic tena marina amin'io antony io, tokony handray an-tsoratra ny anamnesis sy ireo soritr'aretina ianao. Noho izany, amin'ny toe-javatra misy ny lelan'ny lela dia fotsy amin'ny zaza, azo heverina fa misy olana amin'ny fo na ny aty, fa zava-dehibe ny mitsidika ny dokotera mpitsabo mba hanao diagnostic marina.
Ny molotra sy ny lela fotsy amin'ny zaza
Ny fanazavana momba ireo toe-javatra, nahoana ny zaza no ampiasaina amin'ny fiteny fotsy, azo omena vitsivitsy. Voalohany indrindra eo anelanelan'ireo antony ireo dia mivatravatra. Ny takelaka amin'ny candidiasis dia hanana loko fotsy manankarena sy rafitra matevina. Ho sarotra ny hanafoana izany fanagadrana izany, ary hanokatra ny lelany mafy eo ambaniny. Miaraka am-patana, dia hisy ny takelaka eo amin'ny lela, ny tohotra sy ny endriky ny takolaka.
Ny antony iray hafa mahatonga ny felam-bolo manify amin'ny fiteny dia aretina ao amin'ny rafi-panafody. Na ny ARI mahazatra aza dia afaka miaraka amin'ny fanaintainana eo amin'ny tendany sy ny fananganana takelaka amin'ny lela. Ny tendan'ny tenda, ny laryngisy ary ny pharyngitis - izay efa hatrany am-piandohan'ireto aretina ireto dia hita eo amin'ny lelany ny loko matevina manopy fotsy ary mety hivoaka avy amin'ny lavaka mangotraka ny fofona manitra. Lobaka mena amin'ny voninkazo fotsy ao amin'ny zaza
Teboka fotsy amin'ny fitenin'ny ankizy, izay tsy mazava ny antony, mampahatahotra ny ray aman-dreny. Raha tsy mbola hitan'ilay zaza ny takelaka eo amin'ny lela, dia andro maromaro aorian'ny fisehoan-damba fotsy, dia tokony hanantena ny fisehon'ireo aretina lehibe indrindra. Raha manana loko mena midorehitra izay voarakotry ny voninkazo io zaza io, dia mety haneho ny fisian'ny aretina mifoka: ny tazo sy ny diphtheria. Amin'io tranga io, ny loko fotsy eo amin'ny lela dia afaka manova ny loko sy ny lanjany, arakaraka ny fandehan'ny aretina. Noho izany, amin'ny tazo mena midorehitra amin'ny andro voalohany dia maivana sy matevina ny fanafihana, ary mihitsoka eo amin'ny dingan'ny fivoaran'ny aretina izy.
Lamina fotsy amin'ny lelan'ny zaza - fitsaboana
Tsy mety ny miantso ny fomba universal ny fanesorana ny tebiteby. Raha hita ny lelan'ny fotsy hoditra iray, ny fitsaboana dia mifototra amin'ny aretina fototra izay nahatonga ilay takelaka hiseho.
Rehefa mifangaro amin'ny soritr'aretina hafa ny vatana fotsy amin'ny lelan'ny zaza, dia azonao ampiasaina ireto torohevitra ireto:
Zava-dehibe ny mandinika ny sakafo, mampihena ny habetsaky ny tavy sy ny sakafo mamy.
Ampitomboy ny fampiasan'ny ankizy ny rano madio.
Tandremo ny fitsipiky ny fahadiovana, manasa ireo teetechan'ny ankizy, manolo ny nify, ny fiteny, manova ny gnou.
Mitondrà zazakely mba tsy haharesy azy ireo.
Ampitomboy ny fiarovan-tenan'ny zaza, mandehandeha eny amin'ny rivotra madio, milamina, milalao miaraka amin'ny lalao ara-panatanjahantena.
Fa-spa ho an'ny ankizy
Mitombo ny fiarovana amin'ny zaza
Gripa intestinal amin'ny zaza - soritr'aretina sy fitsaboana
Ampitomboina ny tsy fandrenesana ny zaza
Ny fitsaboana sy ny herisetra amin'ny ankizivavy
Fiantohana ny ankizy mpianatra
Bronchopneumonia amin'ny ankizy
Tsy nankasitraka ny tolo-kevitr'i Natalia Vodyanova tamim-pahatsorana ny talkback ... isam-bolana!
Mandihy mandihy amin'ny ankizy
Inona no nofinofin'ny rainy?
Harona ho an'ny tarehy
Ny Duchesse de Cornwall Camilla dia mangataka ny hahita hoe iza no rain'i Prince Harry!
Karazana sakafo amin'ny hotely
Orange - toro-hevitra ho an'ny zana-trondro
Orimbato amin'ny akanjo manga
Ahoana no hanomezana voninkazo any an-trano?
Ahoana ny handravahana dumplings amin'ny fofom-pofona?
Kamia elektrika misy fiantraikan'ny afo velona